Tag: mgbanwe | Martech Zone
Ọ bụrụ na akọwara ahịa inbound gị dị ka olulu, aga m akọwa ahịa email gị dị ka akpa iji jide ndu ndị gafere. Ọtụtụ mmadụ ga-aga na saịtị gị ma soro gị rụọ ọrụ, mana ikekwe oge erubeghị ịtụgharị. Ọ bụ naanị akụkọ, mana m ga-akọwa usoro nke m mgbe m na-eme nyocha ma ọ bụ zụọ ahịa n'ịntanetị: Prezụta - Aga m enyocha weebụsaịtị na mgbasa ozi mmekọrịta iji chọta ọtụtụ ozi m nwere ike
Ọ na-aga n'ekwughị na ụzọ kachasị mma iji nweta ma mepụta njikọ mmetụta uche na ndị ahịa nwere ike ịbụ site na mgbasa ozi mmekọrịta. Otu nwere ike ịhụ ọtụtụ ijeri ndị ọrụ dị iche iche na-elekọta mmadụ media nyiwe; ọ ga-abụ nnukwu mbibi ghara iji ohere ọma a mee ihe. Bọchị ndị a, ọ bụ maka ịchọ ka a hụ ya, nụ ya, wee nwee mmetụta, nke mere na ọ fọrọ nke nta ka onye ọ bụla gaa na akaụntụ ha iji gosipụta echiche ya